Muqdisho iyo dareenka siyaasadeed ee maanta | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Muqdisho iyo dareenka siyaasadeed ee maanta
Muqdisho iyo dareenka siyaasadeed ee maanta
Magaalada Muqdisho ayaa ku sugan saakay marxalad ka duwan sidii ay aheyd labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaana la oran karaa Muqdisho waxaa ay ku waabariistay dareen siyaasadeed iyo shaki bulshadu ka qabaan kulanka xildhibaannada Golaha Shacabka oo waqtigan soconaya.
Waa arin ku cusub kulamadii ay horay u yeelan jiraan xildhibaannada Baarlamaanka in kaddib Salaada Subax ay xildhibaanno sii xaadiraan xarunta Golaha Shacabka taasoo sawir guud ka bixineysa sida kulanku u yahay mid mid aan caadi aheyn oo xasaasi ah.
Lama oga in fadhiga maanta uu tagi doono guddoomiye Prof Maxamed Cismaan Jawaari oo xildhibaannada qaar qabaan in maanta laga doodayo mooshinka ka dhanka ah, laakiin waxaa hubaal ah in uu halkaa tagi doono guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Cabdiwali Muudeey oo la filayo in uu kulanka shir guddoomiyo.
Ciidamo siweyn u hubeysan ayaa la geeyay dhamaanba jidadka gala xarunta Golaha Shacabka kuwaa oo ilaalinaya Amaanka guud ahaan xarunta iyo xildhibaannada halkaa ku shiran.
Ammaanka Xarunta Madaxtooyada oo aan siweyn uga fogeyn xaruntaa Golaha Shacabka ayaa sidoo kale Amniga aad loo adkeeyay, waxaa waddooyinka soo gala xarunta lagu arkayay ciidamo fara badan.
Ilaa iyo hadda xaaladu waa ay degan tahay, laakiin waxaa isha lagu wada hayaa oo bulshadu ka ka war sugayaan sida xaaladu isku badali doonto marka uu kulanku furmo.